LiFePO4 Batrị Factory, Suppliers - China LiFePO4 Batrị Manufacturers
Prismatic maka nchekwa nchekwa Solar Lithium Batrị Lifepo4 3.2V 105Ah
Batrị PLM-105A 3.2V 105Ah batrị na-eji ihe kachasị mma yana ikike kachasị elu enwere ike maka ndị na-azụ ahịa. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Rechargeable Prismatic LiFePO4 Battery 48V 12Ah Battery Cell for Boat ， Car, Power Tụkwasịnụ Station, Weeder
Batrị PLM-12A 48V 12Ah na-agbanye ọkụ na-eji ihe kachasị mma nwere ikike kachasị elu maka ndị ahịa ọkọlọtọ. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Batrị ikuku LiFePO4 Recharge
Batrị PLM-26650 3.6V 5Ah batrị na-eji ihe kachasị mma na ikike kachasị elu enwere ike maka ndị na-azụ ahịa. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Rechargeable Cylindrical LiFePO4 Battery 14500 3.7V 800mAh Batrị Cell maka Ọkà Okwu Bluetooth, Tomụaka ， Elekere
Igwe batrị PLM-14500 3.7V 800mAh nwere ike iji ihe kachasị mma nwere ikike kachasị elu maka ndị ahịa ọkọlọtọ. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Ihe ana-achagharị Cylindrical LiFePO4 Batrị 32700-4S 12.8V 6Ah Batrị ngwugwu maka Sistemụ Akụrụngwa Ihe Grid High-voltaji
Igwe batrị PLM-32700-4S 12.8V 6Ah na-eweghachi ihe na-eji ihe kachasị mma nwere ikike kachasị elu maka ndị ahịa ọkọlọtọ. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
3.2V 10Ah Deep Cycle Rechargeable Lithium Li-ion Batrị 38120S / LiFePO4 Batrị N'ogbe maka Nchekwa Sistem
Batrị na-agbanye ọkụ bụ PLM-38120S 3.2V 10Ah na-eji ihe kachasị mma nwere ikike kachasị elu maka ndị ahịa ọkọlọtọ. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Ngosipụta LCD Ngosipụta 48 Volt Rechargeable Li ion Lithium 48V 200AH Lifepo4 Solar Telecom Batrị na BMS na chaja
Batrị PLM-200A 48V 200Ah nke enwere ike iweghari na-eji ihe kacha mma na ikike kachasị elu enwere ike maka ndị na-azụ ahịa. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Batrị Ntugharị Prismatic LiFePO4-3 24V / 36V / 48V 50Ah / 60Ah / 80Ah Batrị maka ụgbọ mmiri ,gbọala, Ebe a na-eweta ike, ọdụ ụgbọ ala E-ụgbọ ala
Rejeri cha cha PLM-LiFePO4-3 24V / 36V / 48V LiFePO4-3h batrị na-eji ihe kachasị mma na ikike kachasị elu enwere ike maka ndị na-azụ ahịa. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Rechargeable Prismatic LiFePO4 Batrị 48V 100Ah Batrị Pack maka Boat ， Car, Power Tụkwasịnụ Station
Batrị PLM-100A 48V 100Ah na-agbanye ọkụ na-eji ihe kachasị mma nwere ikike kachasị elu maka ndị ahịa ọkọlọtọ. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Prismatic maka Mbara Igwe nchekwa lithium Batrị Lifepo4 48V 25Ah
Batrị PLM-25A 48V 25Ah na-agbanye ọkụ na-eji ihe kachasị mma nwere ikike kachasị elu maka ndị ahịa ọkọlọtọ. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Rechargeable Cylindrical LiFePO4 Battery 32650 3.2V 6Ah Battery Cell maka Bluetooth Ọkà Okwu, ysmụaka ， Electric Torch, E-bike
Batrị batrị PLM-32650 3.2V 6Ah na-eji ihe kachasị mma nwere ikike kachasị elu maka ndị ahịa ọkọlọtọ. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Nkata ike Prismatic LiFePO4 Batrị 3.2V 26Ah Batrị maka ụgbọ mmiri, ụgbọ ala, E-igwe kwụ otu ebe
Batrị PLM-26A 3.2V 26Ah batrị na-eji ihe kachasị mma ma nwee ike kachasị mma maka ndị na-azụ ahịa. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.